Qaybta 4raad Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27 qeebood!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Qaybta 4raad Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27 qeebood!!
Qaybta 4raad Sidee loo tigsadaa nolol dhab ah Ciwaanada buuga wuxuu ka kooban yahay 27 qeebood!!
Feb 03, 2017WARAR
(4)LA IMAW WAX QABAD IYO DHAQ DHAQAAQ
Aduunkan eynu joogno wax looga mahelo waaxad taqaanid kaliya.Waxaa wax looga helaa waxaad ficil ahaan u sameysid waxaa jirto aragti leh,
(markaad xarakaad sameyso waxaad kicisay dhamaan wax yaabihii kuu horseedi lahaa inaad guul gaarto )
Dadka kugu xeeran markey ogaadaan saad ugu diyaar santahy hadaf kaaga wexey kugu soo xiraan dhamaan dareenkooda. Sidoo kale dadka isku yoolka tihiin wexey bilawaan iney kugu soo xirmaan.
waxaad bilawdaa inaad wax kabarato qibradaada waaya aragnimo taasoo aan laga baran Karin
dad aad dhageysato iyo buugaag aa aqriso midna, adiga oo kaa shanaayo qibradaada waxaad barataa sidda ugu dhaqsiyaha badan ee wax looqabto. wax yaabihii kuugu muuqanaayay adeegga, ka kanaanta iyo jah wareerka dhamaantood waxey noqdaan wax adiga kuugu fudud oo waadix ah.
waxad bilaw daa inaad soo jiidato dad ku taaageersan isla mar ahaantaana ku gu dhiirigaliyaan marka aad bilawdo wax qabad iyo dhaq dhaqaaq.
Xarakaad ka iyo ficilku waa waxa kala saara guulesta yaasha iyo maguulesta yaasha.
Haddaba, si aad uguuleysato waxaad bilawdaa inaad soo jiidatid dadka ku tageera ama ku dhiira galiyo marka bilawdo wax qabad iyo dhaq dhaqaaq.
Si aad ugu guleysatid waxa kugu haboon inaad qabatid wixii ey qabteen dadkii kaaga horeyay guusha.
Taas oo kaa saacideyso inaad noqoto qof u jajaban wax qabadka iyo dhaqdhaqaaqa.
5) SIDEE LOSAMESTAA MUSTAQBAL WANAAG SAN?
Mustaqbal wanaagsan oo Guul ku dheehan tahay waa shay qofkasta uu raadinayo, waa shayga aan dhamanteen ka midaysanahay. Mustaqbal wanaagsan inaynu yeelanno waa tan aan u dadaalno dhamaanten waxna u baranno. Mustaqbalka wanaagsan waa kan xambaarsan guul, ee u qofku gaaraayo hadaf uu hiigsaneyay noloshiisa.
Haddaba, si aad u gaadho mustaqbal wanaagsan oo aad guulo badan ugu soo hoyso noloshaada, waxaa lagama maarmaan ah in aad kaga dayato dadkii horey u liibaaney oo aad qaaddo waddadii ay u mareen dariiqooda guusha, taaso hadii la is-yidhaahdo raaca ay suuro gal tahay in la garoo mustaqbal lagu qanci karo. Waxaana la isku raacay arrimo dhawra inay sabab u noqdaan in qofku guulaysto oo uu helo mustaqbal wanaagsan, kuwaas oo qofkii tallaabooyinkan raacaa uu gaaro guusha. Inkastoo qof kasta duruuf u gaar ahi ay jirto, haddana waxa la arkaa in uu gaaro halka uu u socdo.
Haddaba, adiga oo ka duulaya in mustaqbalku uu bilowdo maanta ee aanu ahayn berri, waxa laysla gaaray in qofka raaca tallaabooyinkani uu yahay mid guuleysanayo inshallah; Boqolkii ba boqol qaad masuuliyada noloshaada waxaa jira qofkaliya ee kamasuulka ah tayada noloshaada.
qofkale mahan waa adiga hadii aad rabto inaad guuleysato waa inaad qaado masuuliyad noloshaada adiga ayaa kamasuul ah heerarka guusha aad gaarto natiijooyinka,Soosaartid tayada xiriirka bulshada, xaaladaada cafimaad heerka dhaqaalo darenadaada wax kasto oo noloshaada ah. Dadka guusha gaara mahan dad uu ladhashay nasiibka balse waa dad amiin san (Allah subaxaana qaadirka ah), ku waas oo nafsadoodana kalsooni buuxda ka heesto aminsanna inuu nasiibkooda ku jiro gacmahooda .
Waa waqtigii aad joojin laheed inaad karaadiso meel kabaxsan nafsadaada jawaabaha waa sababta aadan u burburin nafsadaada iyo natiijoyinkii aad u omaneed. Waa adiga kan abuuro nolosha aad hogaanka utahay..
W/Q:-Ifraax Maxamed Cali inta kale lasocda waqti kale………
Previous PostDaawo Muuqaal Musharaxii ugu xamaasadda badnaay ahna Aqoon yahay doonaaya inuu hormariyo Dalka Soomaaliya!! Next PostDAAWO MUUQAAL: Bal u Fiirso Farriimahaaga SMS-ka !!